Hello Nepal News » स्पेन र फ्रान्ससँग भिड्ने पोर्चुगलको टोली घोषणा : को–को परे ?
स्पेन र फ्रान्ससँग भिड्ने पोर्चुगलको टोली घोषणा : को–को परे ?
पोर्चुगलले आगामी तीन खेल खेल्ने आफ्नो सिनियर टोली घोषणा गरेको छ । आज प्रमुख प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोषले आगामी तीन खेल खेल्ने २६ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन् । घोषित टोलीमा अनुभवी र स्टार खेलाडीदेखि पछिल्लो समय क्लब फुटबलमा चम्किरहेका युवा खेलाडीको पनि राम्रो उपस्थिति छ ।
आगामी तीन खेलमा पनि पोर्चुगलको कप्तानी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले नै गर्नेछन् । पोर्चुगलले अब खेल्ने तीन खेल बलिया टोलीहरूसँग छन् । उसले २०१८ को विश्व च्याम्पियन फ्रान्स र स्पेनसँग यसै चरणमा भिडन्त गर्नेछ भने स्वीडेनसँग पनि यसै चरणमा खेल्नेछ ।
पोर्चुगलले यस चरणमा स्पेनसँग मैत्रीपूर्ण खेल र युइएफए नेसन्स लिगमा दुई गरी ३ खेल खेल्नेछ । पोर्चुगलले नेपाली समयअनुसार अक्टोबर ८ तारिखमा स्पेनसँग आफ्नो भूमिमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दा अक्टोबसर १२ मा नेसन्स लिगअन्तर्गत फ्रान्ससँग उसकै भूमिमा खेल्नेछ । त्यसपछि अक्टोबर १५ मा स्वीडेनसँग आफ्नै भूमिमा खेल्नेछ ।
पोर्चुगलको टोलीमा युभेन्टसका रोनाल्डोसहित म्यानचेस्टर सिटीका बर्नान्डो सिल्भा, सिटीकै जुआन कान्सेलो, म्यानचेस्टर युनाइटेडका ब्रुनो फर्नान्डेज, एथ्लेटिको मड्रिडका जुआओ फेलिक्स, उल्भ्सका रुबेन नेभेस, हालै लिभरपुलमा अनुबन्ध भएका डिएगो जोटासहितका खेलाडी टोलीमा समेटिएका छन् । ठूला खेलका लागि प्रशिक्षक सान्तोषले यसपटक पहिलो रोजाइका खेलाडीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
यस्तो छ पोर्चुगलको पूरा टोली :
प्रकाशित मिति १५ आश्विन २०७७, बिहीबार १२:५६